चीनको धम्की- सैन्य मुठभेड चाहेमा भारतलाई नोक्सान गर्न तयार ! « Media for all across the globe
चीनको धम्की- सैन्य मुठभेड चाहेमा भारतलाई नोक्सान गर्न तयार !
पूर्वी लद्दाखको पेगोंग तालमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच आइतबार भएको झडपले नयाँदिल्ली थप चिन्तित देखिएको छ। दुई सैनिक आमने–सामनेपछि सोमबारदेखि दुई देशका सैनिक तथा राजनीतिक बृत्तमा आरोपप्रत्यरोप सुरु भएको छ।
पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ सैनिकले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गरेको भारतीय पक्षले आरोप लगाएको छ। नयाँ स्वरुपका साथ चालिएको चिनियाँ प्रयासलाई भारतीय सैनिकले असफल बनाएको समेत दाबी गरेको छ।
पूर्वी लद्दाखमा आफ्ना सैनिकले बास्तविक नियन्त्रण रेखा पार नगरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चिनियाँ सैनिकका प्रवक्ताले भारतीय सैनिकले नै सीमा पार गरेको आरोप लगाउँदै, आफ्ना सैनिकहरु पेगोंग तालबाट फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भारतले शक्तिशाली चीनको सामना गरिरहेको सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ। यदि, भारतले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहान्छ भने चीनसँग उसको भन्दा धेरै हतियार र क्षमता छ– टाइम्सले धम्कीको शैलीमा चेतावनी दिएको छ। भारतले सैन्य मुठभेड चाहेमा पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी)ले भारतलाई नोक्सान गर्न तयार रहेको समेत सम्पादकीयमा छ।
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारतले नराम्रोसँग हार ब्यहोर्नु परेको थियो। उक्त युद्धको स्मरण गराउँदै, भारतले त्योभन्दा धेरै नोक्सानको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। टाइम्सको सम्पादकीयमा नयाँ दिल्लीलाई अमेरिकाको साथ हुन्छ भन्ने भ्रम मात्रै रहेको बताएको छ।
दुई महिनादेखि पूर्वी लद्दाखका बिभिन्न ठाउँहरुमा दुई सैनिकबीच तनाब कार्यमै छ। गालभान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तिमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए। त्यसपछि केहि शान्त हुने अनुमान गरिएपनि अहिलेसम्म अवस्था तनाबपूर्ण रहेको छ।
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार आइतबार चिनियाँ सैनिकले नयाँ मोर्चा खोल्लका लागि पेगोंग तालको दक्षिणी किनारमा अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, भारतीय सैनिकले चिनियाँ प्रयासलाई विफल बनाएको संचारमाध्यमको दाबी छ।